Panasonic Video Converter: Beddelaan Panasonic MTS M2TS in qaab kasta oo
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan Panasonic MTS M2TS Files in qaab kasta oo si fudud oo dhaqso
Kaamirada badan oo Panasonic toogan videos qaab MTS / M2TS, sida Panasonic HDC-DX1, Panasonic HDC-SD10, Panasonic HDC-HS9 / 20/200/300/350 iwm Tan iyo qaabka adag tahay inuu ciyaaro, edit, ama wadaag, inta badan isticmaala Panasonic u baahan tahay si loogu badalo files Panasonic MTS / M2TS in qaab kale loo isticmaali ballaaran. Maqaalkani waxa uu soo bandhigi doonaa a Converter Panasonic MTS awood leh oo si sahlan loo isticmaalo in aad (M2TS taageeray). Sidaa daraadeed, waxaad si deg deg ah u bedeli karaan Panasonic MTS ama M2TS files si AVI, wmv, MP4, MOV, MPEG iyo wax kasta oo ah qaabab kale audio & video oo caan ah.
Waxaa magaceeda la Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Just la qasabno yar oo sahlan, oo aad si qaab kasta oo aad rabto in aad loogu badalo kartaa files Panasonic in video tayo aad u sarreeya. Intaa waxaa dheer, app waxay bixisaa qaar ka mid ah qalabka tafatirka video classic sida beerista, falinjeeerka, qoqobada, isagoo intaa ku daray saamaynta kala duwan / watermark / subtitles, iwm Habkaani waa mid aad waxtar u leh haddii aad beddelid files kaliya tafatirka ee barnaamijyada video tafatirka, waxaa for ' ll si weyn u fudud in aad mashruucan. Waa maxay dheeraad ah, haddii aad rabto in aad si loogu badalo files Panasonic M2TS / MTS in qalabka qaar ka mid ah loo maqli karo, app tani waxay noqon doontaa doorashada ugu fiican ee aad u. Waxaad ka ciyaari kara faylasha aad ku yaal la saamayn wax soo saarka wanaagsan ee ay si fudud xulashada presetting siiyay qalab, iyada oo aan sameeyo wax goobaha kale.
Next, waxaana idin tusin doonaa sida loo isticmaalo this smart Converter Panasonic M2TS si loogu badalo files Panasonic talaabo talaabo ah. Ka hor inta aan sidaa yeelno, aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan files MTS / M2TS ka fiidiyo Panasonic si aad u computer.
Guji "Add Files" icon inay dajiyaan aad videos Panasonic MTS / M2TS deegaanka si ay barnaamijkan. Haddii kale, waxaad isku dayi kartaa hab kale si ay u dajiyaan faylasha aad. Taasi micnaheedu waa in si toos ah jiidi faylasha Panasonic MTS / M2TS ka your computer si app this.
Fiiro gaar ah: Haddii u baahan, waxaad dib u magacaabi kartaa faylasha, dib-u-diyaarin amarka, iyaga ku eegaan adigoo gujinaya thumbnails video ah, ama xataa iyaga geeyo tegether galay mid ka mid file.
2 Dooro qaab ama qalab sida qaab wax soo saarka
Haddii aad rabto in aad si loogu badalo files Panasonic MTS / M2TS in qaab qaar ka mid ah, waxa aad dooran kartaa in liiska qaabka wax soo saarka this app ee. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad beddelid files for loo maqli karo qalabka qaar ka mid ah, waxaad si toos ah u dooran kartaa qalabka sida qaab wax soo saarka. Format ayaa la siiyaa wax soo saarka ah ee qalabka sida xaqiiqada ah ku haboon doonaa qalab aad ugu wanaagsan.
Si aad u furato liiska qaabka wax soo saarka, riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad, ka dibna tag "qaab"> "Video"> qaabka aad rabto ama "Device" tab> category qalab> qalab gaar ah.
App Tani kulmi kartaa aasaasiga ah baahida video tafatirka, sida goo, dalagga, shaandheyn videos, iyo darto saamaynta video, subtitles iwm fudud riix "Edit" in bar menu, ka dibna waxa aad heli kartaa qalabka video tafatirka kala duwan ee pop- ah ilaa uu furmo suuqa. Just leedahay maad ah!
4 bilow diinta files Panasonic MTS / M2TS
Bilow diinta video adigoo riixaya "Beddelaan" button rukun-midigta hoose ee suuqa kala barnaamijka ka. Wakhtigan, aad ka arki kartaa ulaha gudban ka qoyan oo aan idin tusiyo hawlaha qaab beddelidda. Markii diinta ka ay ka badan tahay, guji badhanka Folder Open si aad u hesho files wax soo saarka.
Hadda, waxaad ka ciyaari kartaa, edit ama wadaagno files Panasonic MTS / M2TS si xor ah.
Beddelaan Canon MTS M2TS Files in qaab kasta oo : Maqaalkani waxa uu inta badan diiradda ku saabsan sida loo badalo files Canon M2TS / MTS in ku dhawaad ​​qaab kasta ama aalad si fudud.
Beddelaan Sony MTS M2TS Files in qaab kasta oo: Tilmaan-bixiyahan waxa bara aad loogu badalo Sony M2TS / MTS video files si kasta oo maqal ah & video format oo caan ah, xataa qalabka.
Waa maxay MTS File : Waxaa maqaalkan fasiraad waxa files MTS si faahfaahsan.
9 Easy muujiye Casharrada on YouTube